साउथका सुपरस्टार अभिनेत्री श्रुति हसन आ’ प’ त्ति ज नक अवस्थामा अर्जुन रामपालसँग बसिरहेको देखिए पछि ,…!!! – News Nepali Dainik
साउथका सुपरस्टार अभिनेत्री श्रुति हसन आ’ प’ त्ति ज नक अवस्थामा अर्जुन रामपालसँग बसिरहेको देखिए पछि ,…!!!
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ समय: २२:२४:५४
साउथका सुपरस्टार कमल हसनकी छोरी तथा अभिनेत्री श्रुति हसनको जन्म सन् १९८६ जनवरी २८ तारिखमा भएको थियो । यो वर्ष श्रुति आफ्नो ३५ औं जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । श्रुति हसन एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्वकी धनी हुन् । उनी एक उत्कृष्ट हुनुका साथै निकै राम्री गायिका पनि हुन् । श्रुति हसन धेरैजसो चर्चामा आइरहन्छिन् र वि वा दसँग उनको गहिरो नाता पनि रहँदै आएको छ ।
Last Updated on: February 8th, 2021 at 10:26 pm